Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iiholide zaselwandle lolona khetho luthandayo kwiBrits
Ayimangalisi into yokuba phantse isiqingatha sabakhenkethi bafuna ukuya kwindawo enelanga yokuchithela ikhefu elunxwemeni- ngakumbi njengoko ihlobo lase-Bhritane liphinde ladanisa abantu abahlala apho.
Ikhefu le-fly-and-flop beach lolona khetho luthandayo kwiBrits abafuna iholide yaphesheya kunyaka ozayo, ityhila uphando olukhutshwe namhlanje (ngoMvulo we-1 kaNovemba) yi-WTM yaseLondon.
Phantse isiqingatha (43%) baceba ukubalekela kwimozulu yamazwe angaphandle bathi iholide yaselwandle iya kuba lolona khetho lwabo luphezulu.
Olona khetho lwesibini luthandwa kakhulu yayilikhefu lesixeko, elichazwe sisithathu (31%) sabaphenduli. Olunye ukhetho oludumileyo ibiziiholide zokuzonwabisa (16%), ukuhamba ngenqanawa (15%), impilo entle (8%) kunye nokutyibiliza ekhephini (7%).
Mhlawumbi ukubonakalisa inyani yokuba i-horizons yokuhamba incinci kakhulu ngo-2020 kunye no-2021, phantse ikota (23%) yathi ifuna ukuhamba umgama omde, ngelixa i-17% yanelisekile likhefu elifutshane.
Kwaye indlela yokubhukisha ibonakala ibonakalisa iingxaki ezixhaphakileyo zokubuyiselwa kwemali ngeeholide kunye nokurhoxiswa phakathi kobhubhani, kunye nesinye kwisithathu sabathengi (31%) besithi bazobhukisha iphakheji, kwaye nje isi-8% sikhetha indawo yokuhlala kuqoqosho lokwabelana - olunjalo. njenge-AirBnB - ngelixa enye i-8% ithi baya kuvuya ngeholide ye-DIY.
Iziphumo zivela kwiNgxelo yoShishino lwe-WTM, ephonononge abathengi be-1,000 malunga nezicwangciso zabo zokuhamba - kwaye i-648 kubo yathi ingathanda ukuba neholide yaphesheya kwehlobo elizayo.
Xa babebuzwa ngabavoti malunga nokuba bangathanda ukuya phi, eyona ndawo iphambili yayiyiSpain, ilandelwa zezinye izinto ezithandwayo zase-Europe ezifana neFransi, i-Italiya neGrisi, kunye ne-USA- ebikade ivaliwe kubakhenkethi baseBritane ukusukela oko ubhubhane wathatha. ibambe ngoMatshi ka-2020.
Olu phando luza kuba ziindaba ezamkelwayo kurhwebo lokukhenketha lokuyonwaba, oluye lwasokola phantse iminyaka emibini yesiphithiphithi, izithintelo kunye nemiyalezo ebhidayo evela kubaphathiswa.
Uphando olwenziwa ngu-Abta lucebise ukuba ukubhukisha kwehlobo ngo-2021 bekungama-83% ezantsi ngo-2019 kwaye phantse isiqingatha seenkampani zokuhamba ziye zabika ukuba akukho kwanyuka kubhukisho ngo-2021 xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo, ngaphandle kwenkqubo yokugonya ebone ngaphezulu kwe-80% yabantu abadala abafanelekileyo e-UK esele bebotshwe ngokupheleleyo.
Iibhodi zabakhenkethi ezisuka kwiindawo ezifana neSpain, iFransi, i-Italiya, iGrisi kunye ne-USA sele zinyusa imisebenzi yazo yentengiso ehlotyeni ukuqinisekisa ukuba amazwe abo aphambili kurhwebo kunye nabathengi.
Kwaye iinqwelomoya kunye nabaqhubi bebesakha amandla njengoko imfuno ibuya, ngakumbi xa izithintelo ezifana nenkqubo yokukhanya kwetrafikhi kunye novavanyo lwe-PCR luthotyiwe.
USimon Press, iWTM London, uMlawuli weMiboniso, uthe: "Sinyamezele phantse iminyaka emibini yezithintelo zokuhamba kunye nokudida, imithetho ebiza kakhulu, ngoko akumangalisi ukuba phantse isiqingatha sabakhenkethi bafuna ukuya kwindawo yokuphumla elwandle enelanga - ngakumbi njengoko ihlobo laseBhritane liye lafika. kwakhona kwabadanisa ukuhlala.
"Uninzi lwethu lugcinwe ekhaya ngexesha lokuvalwa kwaye uninzi lwethu lusasebenza ekhaya, ke ithemba lokuphumla kwindawo yokuphumla kwi-Med liyahenda kakhulu."